搜索 Abhiṇhaṁ 的结果：
abhiṇham：thường xuyên，luôn luôn
abhiṇhaṃ：adv. [abhikkhaṇaṃ 的略形. BSk. abhīkṣṇaṃ] 屢屢，屢次，每每，常常，再三； 接著～，繼續.
abhiṇhaṃ：adv. [abhikkhaṇaṃ の略形. BSk. abhīkṣṇaṃ] しばしば，引続いて.
abhiṇhaṁ：adv. [BSk. abhīkṣṇaṁ]しばしば，引続いて. cf. abhikkhaṇaṁ
abhiṇhaṁ：原：引续-- 订正：经常地；一再地 页码：第32页
[abhi+ṇe¿. （abhikaṇa-saṃ） （īnitea rhimhā ]]tvapāsaṃ=taṇhā-prā. tū-saṃ=tuṇhi-prā.tūpīka-saṃ=tuṇhiaç tuṇhikka-prā. yu-saṃ=tumha-prā. asaṃ=amhaprā. yupādapa-saṃ=tumhārisa-prā. apādapa-saṃ=amhārisa-prāca aasa abhikaṇa-mha-abhiṇha lāsalohūyuea . ī pāḷicāpenitea saddāara abhikkhaṇamha abhiṇhalā mahāvisayakhukhu cī saddasatthaññūa prassanāmarhipe）.]
[အဘိ+ဏေ¿။ （အဘိကဏ-သံ） （ဤ၌ စဉ်းစားဘွယ်ရှိသည်မှာ ＇တွပါသံ=တဏှာ-ပြာ။ တူဝိမ်-သံ=တုဏှိ-ပြာ။တူပီက-သံ=တုဏှိအ，တုဏှိက္က-ပြာ။ ယုပတ်-သံ=တုမှ-ပြာ။ အသ္မာတ်သံ=အမှပြာ။ ယုပါဒပ-သံ=တုမှာရိသ-ပြာ။ အပါဒပ-သံ=အမှာရိသ-ပြာစသည် အပြောင်းအလဲဖြစ်သကဲ့သို့ အဘိကဏ-မှ-အဘိဏှသို့ ပြောင်းလဲလာသလောဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ရိုးမှန်လျှင် ပါဠိစာပေ၌လည်း သဒ္ဒါနည်းအရ အဘိက္ခဏမှ အဘိဏှဖြစ်လာအောင် မဟာဝိသယသုတ်တစ်ခုခုဖြင့် စီရင်ရန် သဒ္ဒသတ္ထညူတို့အဖို့ ပြဿနာမရှိနိုင်ပေ）။]
abhiṇhaṃ：[adv.] often； repeatedly.
Abhiṇhaṁ，（adv.） [contracted form of abhikkhaṇaṁ] repeatedly，continuous，often M.I，442 （°āpattikaahabitual offender），446 （°kāraṇa continuous practice）； Sn.335 （°saṁvāsa continuous living together）； J.I，190； Pug.32； DhA.II，239； VvA.116 （= abhikkhaṇa），207，332； PvA.107 （= abhikkhaṇaṁ）. Cp. abhiṇhaso. （Page 64）
ခဏခဏ၊ မကြာမကြာ၊ အမြဲမပြတ်၊ အဖန်ဖန်၊ များစွာ။
မပြတ်။ အထပ်ထပ်။ အဖန်ဖန်။ စင်းလျင်း။အဘိက္ခဏံ
与 Abhiṇhaṁ 相似的巴利词：